Wasiiradda dalka Lubnaan oo bilaabay in ay iscasilaan | Mudug24
Wasiiradda dalka Lubnaan oo bilaabay in ay iscasilaan
Damianos Kattar, wasiirka deegaanka ee Lubnaan isla markaana aad ugu dhowaa ra’iisul wasaare Xasan Diab, ayaa is casilay madaama ay xoogeystay carada ka dhalatay Qaraxii ka dhacay dalkaasi taladii lasoo dhaafay.
Kattar waa sarkaalkii labaad ee sarsare ee dawladda ka taga, Horaantii Sabtidii, Diab ayaa la sheegay inuu isku dayayay inuu ka dhaadhiciyo Kattar inuu sii joogo xafiiska laakiin uu ku guuldareystay.
Wasiirka warfaafinta ee Lubnaan Manal Abdel Samad ayaa ku dhawaaqay iscasilaadiisa, isagoo sheegay in xukuumada Raiisul Wasaare Xasan Diab ay ku guuldaraysteen inay ku noolaadaan himilooyinka shacabka reer Lubnaan.
Ugu yaraan 158 qof ayaa ku dhintey qaraxa in kabadan 6,000 oo kalena way ku dhaawacmeen, laakiin tirada ayaa la filayaa inay kor u kacdo iyadoo hawlgallada goobidda iyo samatabbixinta ay sii socdaan dadka maqan.
Previous articleSaddex dal oo faro-gelin ku haya doorashada Madaxweynaha Mareykanka
Next articleSawiro Dheeraad ah Marwada 1aad ee dalka oo isbitaal ka dhagax dhigtay Hobyo